Ligue 1 Archives - Myanmar Sports Villages
တော့တင်ဟမ်စပါးစ်အသင်းဟာ နောက်တန်းအင်အားကို ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် အာဆင်နယ်အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ်ထားနေသည့် လိုင်လီနောက်ခံလူ ဂါဘရီရယ်မာဂါဟေးလ်ကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ၎င်း ဗဟိုခံစစ်မှူးဟာ အလားအလာရှိသည့် ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဥရောပအင်အားကြီးကလပ်များအပါအဝင်၊ အာဆင်နယ် နှင့် အဲဗာတန်အသင်းတို့က မျက်စိကျလျက်ရှိပါတယ်။ တော့တင်ဟမ်အသင်းကလည်း ၎င်းတို့ဟာ စိတ်ဝင်စားသည့်အတွက်ကြောင့် ပေါင် ၂၇ သန်းနှင့်အတူ စတင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စပါးစ်နည်းပြမော်ရင်ဟိုဟာ ၎င်းအသင်းရဲ့ ခံစစ်အင်အားကို လာမည့်အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားဖို့ ဦးစားပေးအလုပ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ယခုရာသီ လိုင်လီအသင်းရဲ့ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့်(၄) ရပ်တည်မှုမှာ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည့် ဂါဘရီရယ်လ်ဟာ လိုင်လီအသင်းနှင့် လမ်းခွဲဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ စပါးစ်အသင်းဝါရင့်နောက်ခံလူ ဂျန်ဗာတွန်ဂန်ဟာ ရာသီကုန်လျှင် အသင်းနှင့် လမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်သလို၊ အယ်ဒါဝီရာသည်လည်း လုပ်အားနှုန်းလျော့ဆင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့် မော်ရင်ဟိုက သူရဲ့ခံစစ်ကို ယခုလိုပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားလာတာပါ။ ဂါဘရီရယ်လ်ကိုယ်တိုင်လည်း အသင်းပြောင်းဖို့အတွက် စကားလမ်းကြောင်းထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် လိုင်လီအသင်းတောင်းဆိုသည့် ဈေးတစ်ခုကို ပေးနိုင်ပါက...
ပြင်သစ်လီဂူး-၁ ပြိုင်ပွဲချန်ပီယံ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းမှ ကစားသမား(၃)ဦးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခြင်းခံခဲ့ရ တယ်လို့ဖော်ပြမှုတွေရှိခဲ့ပြီး ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကလည်း အတည်ပြုခဲ့တာပါ။ ပြင်သစ်လီဂူး-၁ ပြိုင်ပွဲကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကိုချန်ပီ ယံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဖျက်သိမ်းထားခဲ့ပေမယ့် ပြင်သစ်ပြည်တွင်းဖလားပွဲစဉ်တွေ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားဖို့ရှိနေ တာဖြစ်ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ ပြည်တွင်းဖလားဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေယှဉ်ပြိုင်က ကစားဖို့ ကျန်ရှိနေတာကြောင့် အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေ ပြန်လည်စတင်ဖို့စီစဉ်ရာမှာ တနင်္လာနေ့က ကိုရို နာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ကစားသမား(၃)ဦးနဲ့ အသင်းရဲ့ဝန်ထမ်း (၁)ဦးတို့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကလည်းအတည်ပြုသွားခဲ့ တာပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ကစားသမား(၃)ဦးနဲ့ အသင်းမှ ဝန်ထမ်းတို့ကို မည်သူတွေဖြစ်တယ် ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပဲ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ပဲ ကူးစက်ခံရပြီး ရောဂါလက္ခဏာပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်း website က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့တွေရောဂါမကူးစက်နိုင်တော့တဲ့ အချိန်ကြာမြင့်လာမှ သူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေး...
ပီအက်စ်ဂျီနဲ့အတူ သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုရယူဖို့ အာရုံစိုက်နေတဲ့ နေမာ
နေမာဟာ ပီအက်စ်ဂျီရဲ့ ကြယ်ပွင့်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာ အောင်မြင်လိုတဲ့ ပြင်သစ် ကလပ်အသင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက် အဓိက အားထားရမယ့်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နေမာဟာ (၂၀၁၇)ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာမှ ပီအက်စ်ဂျီထံကို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ပြောင်းရွေ့ကြေး ယူရို(၂၂၂)သန်းနဲ့ ပြောင်းရွေ့လာ ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး ကစားသမားအဖြစ်ရှိနေသူပါ။ ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပြိုင်ဘက်မရှိ အောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက် ဟာနေမာနဲ့အတူ ဒီရာသီမှာရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ နေမာကလည်း ပြင်သစ်ကလပ်အသင်းနဲ့ အဆိုပါ သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုအတွက် ပိုမိုအာရုံစိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ UEFA ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ကိုသြဂုတ်လအတွင်းမှာ ပြိုင်ပွဲငယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ ပေါ်တူဂီမှာ ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး လီဂူးဝမ်းပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ တာကြောင့် ပီအက်စ်ဂျီဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအတွက် (၆)လနီးပါး ပြင်ဆင်ချိန်ရရှိနေခဲ့ပါတယ်။ (၁၆)သင်း အဆင့်မှာ ဒေါ့မွန်ကိုအနိုင်ယူပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်ကို ကြိုတင်တက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပီအက်စ်ဂျီဟာ အခြား သောပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာမယ့် အသင်းတွေထက်စာရင် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်နေတယ်လို့ ယေဘူယျ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့အတူ...
ရာသီအကုန်မှာ PSG အသင်းကို စွန့်ခွာတော့မည့် ဝါရင့် ကစားသမား (၂)ဦး
ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ အသင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ရာမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ ကစားသမား(၂)ဦးကို စာချုပ်သစ်အတွက် ကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ ယခုလပိုင်းအတွင်းမှာ အင်တာမီလန်က အငှားခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ အာဂျင်တိုင်းသား တိုက်စစ်မှူး အီကာဒီကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူထားခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ကလပ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ နေမာ၊ ဘာပေ၊ အီကာဒီ၊ ကာဗာနီ တို့လိုထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူး (၄)ဦးရှိနေပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်စစ်မှူး(၄)ဦးမှာ ကာဗာနီတစ် ဦးတည်းသာ အရွယ်လွန်တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်နေပြီး အသင်းနဲ့လည်းစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့် အခြေအနေမှာ ပီအက်စ်ဂျီကို စွန့်ခွာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြမှုတွေအရ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ ကာဗာနီချုပ်ဆိုထား တဲ့စာချုပ်သက်တမ်းက ယခုလ ဇွန်လအကုန်မှာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ ပီအက်စ်ဂျီက ထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အသက်(၃၃)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကာဗာနီဟာ (၂၀၁၃)ခုနှစ်မှာ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းထံကို နာပိုလီအသင်းမှ ပြောင်းရွေ့ကြေး ယူရို(၆၄)သန်းနဲ့ ပြောင်းရွေ့လာသူဖြစ်ပြီး (၇)နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ပီအက်စ်ဂျီအတွက် လိဂ်ပွဲ(၂၀၀)၊ (၁၃၈)ဂိုးနဲ့ ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် (၃၀၁)ပွဲနဲ့ သွင်းဂိုး(၂၀၀) သွင်းယူပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကာဗာနီကဲ့သို့...
PSG အသင်းတိုက်စစ်မှူး နေမာဟာ သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆန္ဒရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း PSG အသင်းဖော်များထံရင်ဖွင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ကာလရောက်တိုင်း နေမာရဲ့ ဒီသတင်းဟာ မီဒီယာများအတွက်တော့ တခုတ်တရဖော်ပြရတဲ့ သတင်းထူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နေမာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ PSG ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို ၂၂၂ သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော်လည်း ပြင်သစ်မြေမှာတော့ ပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိပဲ အသင်းဟောင်းကို ပြန်ဖို့သာ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကလည်း နေမာကို ပြန်ခေါ်ဖို့အတွက် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားခဲ့ပြီး အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကာလမှာတော့ ငွေသားသီးသန့် ယူရိုသန်း ၁၀၀ + ကစားသမား ၂ ဦးအထိ အလိုက်ပေးကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် PSG ကတော့ နေမာအတွက် သူတို့ခေါ်ယူစဉ်က ပေးချေခဲ့ရတဲ့အတိုင်း ငွေသားသီးသန့် ယူရို သန်း ၂၀၀ အထက်ကို အလိုရှိခဲ့တာကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့ဟာ အော်တိုပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။...
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ အမေ့ခံကွင်းလယ်လူကို ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစားထားသည့် PSG
ပြင်သစ်လီဂူး-၁ ဘုရင် PSG အသင်းဟာ ၉ ကြိမ်မြောက် လိဂ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် လာမည့် ၂၀၂၀-၂၁ ရာသီအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ငွေကြေး ဓနအင်အားတောင့်တင်းသလို၊ ကစားသမားအင်အားတောင့်တင်းတဲ့ PSG ဟာ နောက်ထပ် ကစားသမားသစ်တွေကို ဝယ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ PSG အသင်းရဲ့ ဒါရိုက်တာ လီယိုနာဒိုကတော့ ကွင်းလယ်ကို ထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းဖို့အတွက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှ မိုနာကိုအသင်းမှာ အဌားဖြင့် သွားရောက်ကစားလျက်ရှိသည့် အမေ့ခံကွင်းလယ်လူ ဘာကာယိုကို ကိုခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ မိုနာကိုအသင်းနှင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့သည့် ဘာကာယိုကိုဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ပေါင်သန်း ၄၀ ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော်လည်း အင်္ဂလန်မြေမှာ ထင်သလောက် ခြေစွမ်းမပြတာကြောင့် ၂၀၁၈ မှာ အေစီမီလန်ကို အဌားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ အီတလီမြေမှာလည်း မျှော်လင့်ထားသလောက် မလုပ်ပြနိုင်သည့်အတွက် ရာသီအကုန်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။...
Categories Ligue 1/Premier Leauge/Transfer
PSG အသင်းဟာ အင်တာမီလန်အသင်းမှ အဌားစာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူထားသည့် အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူး အိုက်ကာဒီကို သဘောကျနှစ်ချိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် အပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ PSG အသင်းဟာ အိုက်ကာဒီအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း ၅၀ + အပိုဆုကြေးငွေ ယူရို ၁၀ သန်းဖြင့် စတင်ကမ်းလှမ်းထားပြီး နှစ်ဖက်အသင်းမှ ဆွေးနွေးညှိ့နှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ အစေးမကပ်တဲ့ အိုက်ကာဒီဟာ သူကိုယ်တိုင်လည်း အင်တာမီလန်ကို ကျောခိုင်းပြီး အသင်းပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေသည့်အပြင် ဥရောပအင်အားကြီးကလပ်များကလည်း ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အိုက်ကာဒီဟာ PSG အသင်းနှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲစုံစုစုပေါင်း (၃၁) ပွဲအထိ ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး(၂၀) အထိကို သွင်းယူထားပါတယ်။ PSG ဟာ ယခင်က အိုက်ကာဒီကို ခေါ်ယူဖို့ စဉ်းစားတွေဝေမှုတွေရှိလာခဲ့သော်လည်း စီးရီးအေကလပ်များဖြစ်သည့် ဂျူဗင်တပ်စ် နှင့် နာပိုလီအသင်းတို့က အပြိုင်အဆိုင်ခေါ်ယူဖို့...
အမ်ဘတ်ပီ ရဲ့ အားကျရဆုံး သူရဲကောင်း နှစ်ယောက်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
ပြင်သစ်အသင်းနှင့် PSG အသင်းတို့၏ တိုက်စစ်မှူး အမ်ဘတ်ပီဟာ သူ့ဘဝရဲ့ အားကျရဆုံး ကစားသမား ၂ ဦး၏ အမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စံထားရတဲ့ အဆိုပါ ကစားသမား (၂) ယောက်ကတော့ ရီးရဲလ်နည်းပြ ဇီဒန်း နှင့် ဂျူဗင်တပ်စ် စတား ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုဖြစ်ပါတယ်။ အမ်ဘတ်ပီဟာ ရော်နယ်လ်ဒို နှင့် မက်ဆီတို့မရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်း ဘောလုံးလောကကို ဆက်ခံသူအဖြစ် လျာထားသတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။ အသက်အရွယ်အားဖြင့် (၂၁) ဝန်းကျင်သာရှိသော်လည်း အမ်ဘတ်ပီဟာ ဘောလုံးလောကမှာ မှတ်တိုင်များစွာ စိုက်ထူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် (၂၀) လောက်ကတည်းက ပြင်သစ် အသင်းနှင့်အတူ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ အကောင်းဆုံး လူငယ်ကစားသမားဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။ အမ်ဘတ်ပီဟာ စီရော်နယ်လ်ဒို ကို အရူးအမူးဖြစ်သလို၊ တနိုင်ငံသားချင်းဖြစ်တဲ့ ဇီဒန်းရဲ့ ဂန္ဓဝင်မြောက်ခြေစွမ်းတွေကို...
PSG ဟာ အသင်း၌ အဌားဖြင့် လာရောက်ကစားနေသည့် အင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှူး အိုင်ကာဒီကို အပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့အတွက် ယူရိုသန်း ၅၀ ဖြင့် စတင်ဈေးဖွင့်ကာ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း Sky Sports ကဖော်ပြထားပါတယ်။ PSG ဟာ အိုင်ကာဒီအတွက် ယူရိုသန်း ၅၀ အပြင် တခြားအပိုဆုကြေးငွေ ယူရို၁၀သန်းပါ ထည့်သွင်းကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ အိုင်ကာဒီဟာ ၂၀၁၉-၂၀ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ PSG အသင်းထံကို တစ်ရာသီအဌားဖြင့် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး ရာသီကုန်လျှင် ယူရိုသန်း ၇၀ ဖြင့် ဝယ်ယူဖို့ စာချုပ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အိုင်ကာဒီဟာ ပြင်သစ်မြေမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေကို ပြသထားပြီး ကစားခဲ့သည့် ပြိုင်ပွဲစုံစုစုပေါင်း ၂၈ ပွဲမှာ ဂိုးပေါင်း ၂၀ အထိသွင်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းဟာ အိုင်ကာဒီကို အလွတ်ကြေးနှင့် လက်လွှတ်ရမှာစိုးရိမ်တာကြောင့် PSG သို့ မပြောင်းရွှေ့ခင်...